အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ပြသနာများ – Gentleman Magazine
အခုလို ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ လူနေမှုဘဝကြီးမှာ အိပ်ရေးဝဖို့ခက်ပါတယ်။ လူသားအားလုံးရဲ့ တစ်ဝက်နီးပါးဟာ အိပ်ရေးမဝကြပါဘူး။ လူအားလုံးလိုလို အိပ်မပျော်တဲ့ ပြသနာကို ခံစားဖူးကြမှာပါ။ တချို့တွေဆိုရင် ညတိုင်းလိုလို အိပ်မပျော် ဖြစ်နေတတ်ပြီး အဲဒါဟာ အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပြသနာတစ်ခုပါ။
အိပ်မပျော်တာကို ဆေးဝါးတွေမသောက်ပဲ ကုသနိုင်ပါတယ်။ တချို့ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါတွေဟာ ပြင်ပ ပါတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ဥပမာ ဆူညံသံတို့ မတည့်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပါ။ သူတို့ဟာ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဖယ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားပါတယ်။ တချို့ကျတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုက မအိပ်နိုင်တာပါ။ မအိပ်နိုင်တာဟာ လူတွေကို ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်ညစ်စေတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်နေရင် ပိုပြီး အိပ်မရ ဖြစ်လာပါရော။
အောက်မှာ ပညာရှင်တွေ ပြောထားတဲ့ အိပ်ပျော်ဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ နည်းလမ်း ၇ ချက်ကို တင်ပြထားပါတယ်။
၁. အိပ်ရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့
အိပ်လို့မရတာဟာ တော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ပဲ မျက်လုံးကြောင်ပြီး ညကို ဖြတ်သန်းရရင် ကြောက်ပြီး စိတ်ညစ်လာတတ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ ဒေါသထွက်လာပါတယ်။အဲလိုတွေ မဖြစ်ဖို့အတွက် အိပ်ရာနားမှာ မဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မထားပါနဲ့။ အသံမြည်နေမယ့် နာရီတွေလိုမျိုးပေါ့။ အိပ်လို့မရရင် အိပ်ရာထဲ လှဲမနေပါနဲ့။ မနက်ဖြန် အိပ်ရေးမဝလို့ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းမယ်ဆိုတဲ့အစား မနက်ဖြန်ညတော့ အိပ်လို့ကောင်းပြီလို့ တွေးကြည့်ပါ။
၂. သက်တောင့်သက်သာ အနားယူဖို့ လေ့ကျင့်ပါ
တကယ်လို့ သင်ဟာ မအိပ်နိုင်လို့ အရမ်းစိတ်ညစ်နေရင် ခန္ဓာကိုယ်က စိတ်ဖိစီးစေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပါတယ်။ အဲဒါက သင့်ကို ပိုပိုပြီး စိတ်ညစ်စေပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြေလျော့နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခု လုပ်ကြည့်ပါ။ ကြွက်သားတစ်ခုချင်းစီကို အာရုံစိုက်ပြီး ဖြေလျော့ကြည့်ပါ။ တရားထိုင်ခြင်းကလဲ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
၃.အိပ်စက်ခြင်းအကြောင်း အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပါ
ဒီမှာ အပိုင်း ၂ ပိုင်းပါပါတယ်။ ပထမ လူတွေ သူတို့ အိပ်မပျော်တဲ့အကြောင်းအတွေးတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ရပါတယ်။ အိပ်မပျော်မှာကို ကြိုစိုးရိမ်ခြင်းဟာ ပြသနာကို ပိုကြီးထွားစေပါတယ်။ သူတို့ အမှန်တကယ် အိပ်ပျော်တာထက် အိပ်ချိန်နည်းနေတယ်လို့ ဥပါဒါန် ဝင်တတ်ပါတယ်။ အဲဒိအတွေးတွေကို ပြောင်းပစ်နိုင်ရင် အိပ်ပျော်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဒုတိယက အပေါ်က ကြွက်သားလျှော့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့အောင်တရားထိုင်တာကို ပေါင်းထားတာပါ။ အိပ်ဖို့အတွက် အေးပြီး တိတ်ဆိတ် မှောင်မိုက်တဲ့ အခန်းတစ်ခု ဖန်တီးထားခြင်းကလဲ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကရှင်းပါတယ်။အိပ်မပျော်ရင် အိပ်ရာထဲမှာဆက်နေပြီး အိပ်ဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့။ မိနစ် ၂၀ ကျော် ကြိုးစားပြီးတာတောင် အိပ်မပျော်သေးရင် အိပ်ရာထဲကထပြီးတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ တီဗွီတွေ မကြည့်ပါနဲ့။ အဲဒါက ပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့အချိန်မှာ အိပ်ရာထဲက ထွက်လိုက်တာဟာ မကောင်းတဲ့အတွေးတွေ မတွေးမိအောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ အိပ်ချိန်နည်းသွားတာဟာ မနက်ဖြန် စောစောအိပ်ပျော်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။
နံပါတ် ၃ မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပေါင်းလုပ်ပြီး အိပ်စရာ အခန်းကောင်းကောင်း လုပ်ထားခြင်းဟာ အကျိုးရှိစေနိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ။
၆. အိပ်ပျော်ဖို့ အရမ်းမကြိုးစားပါနဲ့
ရယ်စရာကောင်းတာက အိပ်ပျော်ဖို့ အရမ်းကြိုးစားရင်လည်း အိပ်မပျော်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်ဖို့ စိတ်မပူပဲ နေတာဟာ ပိုပြီးမြန်မြန်နဲ့ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ် တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုးနိုးကြားကြားနေဖို့ ကြိုးစားတာဟာ အိပ်မပျော်ရင်ထွက်တဲ့ ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်လို့ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာတာ၊ ကြွက်သားတွေ တင်းလာတာ၊ အသက်ရှုမြန်တာတွေကို ဂရုစိုက်ပြီး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင် ထိန်းပေးပါ။ အဲဒါဟာ အိပ်မပျော်ဖြစ်တာကို ပျောက်စေနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်အိပ်မပျော်ဖြစ်နေရင် အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ တစ်ချက်ချက်ကို စမ်းကြည့်ပါ။ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ရခြင်းဟာ ဘဝကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။
အခုလို ရှုပျထှေးခကျခဲတဲ့ လူနမှေုဘဝကွီးမှာ အိပျရေးဝဖို့ခကျပါတယျ။ လူသားအားလုံးရဲ့ တဈဝကျနီးပါးဟာ အိပျရေးမဝကွပါဘူး။ လူအားလုံးလိုလို အိပျမပြျောတဲ့ ပွသနာကို ခံစားဖူးကွမှာပါ။ တခြို့တှဆေိုရငျ ညတိုငျးလိုလို အိပျမပြျော ဖွဈနတေတျပွီး အဲဒါဟာ အရမျးစိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈဖို့ကောငျးတဲ့ ပွသနာတဈခုပါ။
အိပျမပြျောတာကို ဆေးဝါးတှမေသောကျပဲ ကုသနိုငျပါတယျ။ တခြို့ အိပျမပြျောတဲ့ရောဂါတှဟော ပွငျပ ပါတျဝနျးကငျြကွောငျ့ဖွဈတာပါ။ ဥပမာ ဆူညံသံတို့ မတညျ့တဲ့ ဓာတျပစ်စညျးတှကွေောငျ့ပါ။ သူတို့ဟာ ဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ဖယျလိုကျရငျ ကောငျးသှားပါတယျ။ တခြို့ကတြော့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကိုက မအိပျနိုငျတာပါ။ မအိပျနိုငျတာဟာ လူတှကေို ဒေါသထှကျပွီး စိတျညဈစတေတျပါတယျ။ အဲလိုဖွဈနရေငျ ပိုပွီး အိပျမရ ဖွဈလာပါရော။
အောကျမှာ ပညာရှငျတှေ ပွောထားတဲ့ အိပျပြျောဖို့ အထောကျအကူပွုတဲ့ နညျးလမျး ရ ခကျြကို တငျပွထားပါတယျ။
၁. အိပျရမှာကို မကွောကျပါနဲ့
အိပျလို့မရတာဟာ တျောတျော စိတျပကျြဖို့ကောငျးပါတယျ။ တဈညလုံး အိပျမပြျောပဲ မကျြလုံးကွောငျပွီး ညကို ဖွတျသနျးရရငျ ကွောကျပွီး စိတျညဈလာတတျပါတယျ။ အိပျပြျောဖို့ကွိုးစားရငျးနဲ့ ဒေါသထှကျလာပါတယျ။အဲလိုတှေ မဖွဈဖို့အတှကျ အိပျရာနားမှာ မဆိုငျတဲ့ ပစ်စညျးတှေ မထားပါနဲ့။ အသံမွညျနမေယျ့ နာရီတှလေိုမြိုးပေါ့။ အိပျလို့မရရငျ အိပျရာထဲ လှဲမနပေါနဲ့။ မနကျဖွနျ အိပျရေးမဝလို့ ဘယျလောကျပငျပနျးမယျဆိုတဲ့အစား မနကျဖွနျညတော့ အိပျလို့ကောငျးပွီလို့ တှေးကွညျ့ပါ။
၂. သကျတောငျ့သကျသာ အနားယူဖို့ လကေ့ငျြ့ပါ
တကယျလို့ သငျဟာ မအိပျနိုငျလို့ အရမျးစိတျညဈနရေငျ ခန်ဓာကိုယျက စိတျဖိစီးစတေဲ့ ဟျောမုနျးတှေ ထုတျပါတယျ။ အဲဒါက သငျ့ကို ပိုပိုပွီး စိတျညဈစပေါတယျ။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို ဖွလြေော့နိုငျမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုခု လုပျကွညျ့ပါ။ ကွှကျသားတဈခုခငျြးစီကို အာရုံစိုကျပွီး ဖွလြေော့ကွညျ့ပါ။ တရားထိုငျခွငျးကလဲ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
၃.အိပျစကျခွငျးအကွောငျး အတှေးတှကေို ပွောငျးလဲပဈပါ
ဒီမှာ အပိုငျး ၂ ပိုငျးပါပါတယျ။ ပထမ လူတှေ သူတို့ အိပျမပြျောတဲ့အကွောငျးအတှေးတှကေို ပွောငျးလဲပဈရပါတယျ။ အိပျမပြျောမှာကို ကွိုစိုးရိမျခွငျးဟာ ပွသနာကို ပိုကွီးထှားစပေါတယျ။ သူတို့ အမှနျတကယျ အိပျပြျောတာထကျ အိပျခြိနျနညျးနတေယျလို့ ဥပါဒါနျ ဝငျတတျပါတယျ။ အဲဒိအတှေးတှကေို ပွောငျးပဈနိုငျရငျ အိပျပြျောဖို့ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
ဒုတိယက အပျေါက ကွှကျသားလြှော့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ စိတျဖိစီးမှုလြော့အောငျတရားထိုငျတာကို ပေါငျးထားတာပါ။ အိပျဖို့အတှကျ အေးပွီး တိတျဆိတျ မှောငျမိုကျတဲ့ အခနျးတဈခု ဖနျတီးထားခွငျးကလဲ အထောကျအကူ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကရှငျးပါတယျ။အိပျမပြျောရငျ အိပျရာထဲမှာဆကျနပွေီး အိပျဖို့ကွိုးစားမနပေါနဲ့။ မိနဈ ၂၀ ကြျော ကွိုးစားပွီးတာတောငျ အိပျမပြျောသေးရငျ အိပျရာထဲကထပွီးတဈခုခုလုပျလိုကျပါ။ ကှနျပြူတာ၊ ဖုနျး၊ တီဗှီတှေ မကွညျ့ပါနဲ့။ အဲဒါက ပိုဆိုးသှားစနေိုငျပါတယျ။ အိပျမပြျောတဲ့အခြိနျမှာ အိပျရာထဲက ထှကျလိုကျတာဟာ မကောငျးတဲ့အတှေးတှေ မတှေးမိအောငျ တားဆီးပေးပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာ အိပျခြိနျနညျးသှားတာဟာ မနကျဖွနျ စောစောအိပျပြျောဖို့ အထောကျအကူဖွဈမှာပါ။
နံပါတျ ၃ မှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို သကျတောငျ့သကျသာရှိစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှနေဲ့ပေါငျးလုပျပွီး အိပျစရာ အခနျးကောငျးကောငျး လုပျထားခွငျးဟာ အကြိုးရှိစနေိုငျပါတယျ။ စမျးကွညျ့ပါ။
၆. အိပျပြျောဖို့ အရမျးမကွိုးစားပါနဲ့
ရယျစရာကောငျးတာက အိပျပြျောဖို့ အရမျးကွိုးစားရငျလညျး အိပျမပြျောဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အိပျပြျောဖို့ စိတျမပူပဲ နတောဟာ ပိုပွီးမွနျမွနျနဲ့ ကောငျးကောငျး အိပျပြျောစနေိုငျပါတယျ တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုးနိုးကွားကွားနဖေို့ ကွိုးစားတာဟာ အိပျမပြျောရငျထှကျတဲ့ ဖိစီးမှုဟျောမုနျးတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျလို့ပါ။
စိတျဖိစီးမှုရဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ နှလုံးခုနျနှုနျးမွနျလာတာ၊ ကွှကျသားတှေ တငျးလာတာ၊ အသကျရှုမွနျတာတှကေို ဂရုစိုကျပွီး ပုံမှနျပွနျဖွဈအောငျ ထိနျးပေးပါ။ အဲဒါဟာ အိပျမပြျောဖွဈတာကို ပြောကျစနေိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ သငျအိပျမပြျောဖွဈနရေငျ အပျေါမှာ ရေးထားတဲ့ တဈခကျြခကျြကို စမျးကွညျ့ပါ။ အိပျရေးဝဝအိပျရခွငျးဟာ ဘဝကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျပါတယျ။
Previous: သင့်ကြွက်သားတွေ အများဆုံး ဘယ်လောက်ထိ ကြီးထွားနိုင်သလဲ??
Next: သင် သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အရာ ၁၃ ခု